SAC ralhrang pawl chin ram ah rat an ttih tuk cang ti ah thawngthanh nak an tuah cang – Lai Lungrawn Post
Peku le Mon ram palek hna cu chinram kulh van thial ding tiah an pu le nih an thanh i palek hna nih chin ramkulh rat cu an tih tuknak kong palek pakhat nih Mizima mediaachim.
Palek (PK)katuannak asau cang nain meithal hmanh thathi ka hmang kho rih lo, thihnak khur ah aa kan kuat asi ko, atu hi chinram kulh ah kal duh lomi an tamtuk tiah palek nih achim.Chin mi hna kawl palek le ralkap nih aa kan tih tuk ko. Thazaang chuah chin hna usih.
ပဲခူးနှင့်မွန်မှ ရဲများကို တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့် ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းသို့ ပြောင်း‌ရွှေ့ခိုင်း စက်တင်ဘာ ၁၀ ပဲခူတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ချင်းပြည်နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့နေရာများ၌ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု စက်တင်ဘာ ၆ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရသည်။ပြောင်းရွှေ့ရမည့် ပြည်နယ်ထဲတွင် နယ်မြေခံ PDF များနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးနေသည့် ချင်းပြည်နယ် ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် မပြောင်း ရွှေ့ခြင်သူများပြားနေကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူများထံမှသိရသည်။
“ကျနော်က ယာဉ်ထိန်းရဲလုပ်လာတာကြာပြီ သေနတ်တောင်ကောင်းကောင်းမပစ်တတ်တော့ဘူး အဲ့ဒါကို တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကို ပို့တယ်ဆိုတော့ သေတွင်းထဲပို့နေတာဗျ အခုလဲ မသွားခြင်တဲ့သူများနေလို့ ပြေးမှာစိုးလို့ စောင့်ကြည့်နေကြတယ် “ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲတဦးမှပြောသည်။အဆိုပါအပြောင်းရွှေ့မှာ ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ကျရာနေရာတွင် အနေကြာလာပါကပြောင်းရွှေ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်တွင်လဲ ၂ကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း ရဲအရာရှိတဦးမှပြောသည်။
အဆိုပါ အပြောင်းအရွှေ့စာရင်းအယောက် ၃၅၀တွင် တပ်ကြပ်ကြီးမှ တပ်သားအဆင့်ထိဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလတွင် ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဟုပါရှိသည်။အပြောင်းအရွေ့စာရင်းတွင် ပဲခူးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲများ အများဆုံးပါဝင်နေသည်။ ချင်းပြည်နယ်တွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြား CDMလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။